Posted by Tranquillus | Mar 16, 2021 | Xirfadaha hadalka iyo qoraalka afka
Waxaa muhiim ah in la ogaado sida wanaagsan ee wax loo qoro shaqada lagana fogaado khaladaadka iyo ereyada xun. Si tan loo sameeyo, xalka ugu fiican ayaa ah inaad waqti siiso dib u akhrinta kadib markaad qorista dhamayso. In kasta oo tani ay badanaa tahay tallaabo la dayacay, waxay door muhiim ah ka qaadataa tayada qoraalka ugu dambeeya. Halkan waxaa ku yaal tilmaamo ku saabsan akhriska iyo akhriska.
Waa su'aal halkan dib loogu akhrinayo hab caalami ah marka hore. Tani waxay noqon doontaa fursad aad qoraalka guud ahaan madaxaaga u geliso oo aad ku hubiso ku habboonaanta fikradaha kala duwan iyo sidoo kale abaabulidda kuwan. Tan waxaa badanaa loogu yeeraa akhrinta asalka waxayna caawineysaa in la hubiyo in qoraalka macno samaynayo.
Markaad akhriso qoraalka oo dhan, waxaad u baahan doontaa inaad u gudubto akhrinta weedhaha. Talaabadani waxay ujeedadeedu tahay inay cadeyso jumladaha kala duwan iyadoo lagu horumarinayo tibaaxaha la adeegsaday.
Sidaa darteed waxaad fiiro gaar ah u yeelan doontaa qaab-dhismeedka weedhahaaga oo aad isku dayi doontaa inaad xadido jumladaha dhaadheer. Ujeeddadu waxay noqon doontaa in la helo weedho u dhexeeya 15 illaa 20 erey ugu badnaan. Marka wejigu ka dheer yahay 30 eray, way adkaanaysaa in la akhriyo oo la fahmo.
Marka marka aad la kulanto jumlado dhaadheer inta aad wax akhrinaysid, waxaad leedahay laba ikhtiyaar. Midka hore waa in jumlada loo kala qaado laba. Midda labaad waa in la adeegsado isku xirayaal macquul ah oo sidoo kale loo yaqaan "erayada aaladda" si loo abuuro is waafajin weedhahaaga.
READ Marka wajiga wejiga uu ka fiican yahay emailka
Intaas waxaa sii dheer, waxaa lagugula talinayaa inaad ka fogaato jumladaha aan tooska ahayn oo aad u xagliso codka firfircoon.
Hubi adeegsiga ereyga
Waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad hubiso inaad ku isticmaashay ereyada saxda ah meelaha saxda ah. Halkan, waa lagama maarmaan in la isticmaalo erayo qaas ah oo ku saabsan xirfadda. Dareenkan, waa inaad isticmaashaa ereyo laxiriira goobtaada waxqabadka. Si kastaba ha noqotee, waa inaad diirada saartaa ereyada la yaqaan, gaaban iyo kuwa cad.
Ogow ereyada fudud, ee si fudud loo fahmi karo waxay fariinta ka dhigayaan mid sax ah. Marka waxaad hubsan doontaa in akhristayaashu ay si fudud u fahmi doonaan qoraalkaaga. Dhinaca kale, markaad isticmaasho ereyo dhaadheer ama dhif ah, akhrinta ayaa si qoto dheer u saameyn doonta.
Sidoo kale, xusuusnow inaad dhigto ereyada ugu muhiimsan bilowga xukunka. Daraasaduhu waxay muujiyeen in akhristayaashu xasuustaan ​​ereyada bilowga jumlado badan.
Akhrinta heerarka iyo heshiisyada
Waa inaad ku dadaashaa inaad saxdo heshiisyada naxwaha, khaladaadka higgaadda, lahjadaha, iyo xarakaynta. Runtii, daraasadihii horey loo sheegay waxay muujiyeen in higgaadintu tahay takoor. Si kale haddii loo dhigo, waxaad halis ugu jirtaa in si khaldan loo qiimeeyo ama ay si xun u fahmaan akhristayaashaadu haddii qoraalkaagu khaladaad ku jiro.
Ikhtiyaar kale ayaa ah in la isticmaalo softiweer sax ah si loo saxo khaladaadka qaarkood. Si kastaba ha noqotee, waa in loo adeegsadaa taxaddar weyn maxaa yeelay waxaa laga yaabaa inay leeyihiin xaddidaadyo xagga qoraalka ama naxwaha. Sidaa darteed, waa in aan si buuxda loogu kalsoonaan karin.
Ugu dambeyntiina, kor u aqri qoraalkaaga si aad u aragto weedho kasta oo khalad ka dhawaajinaya, ku celcelin, iyo arrimo la xiriira qaabeynta.
Sidee loo cadeeyaa qoraalka xirfadlaha ah? 17-Maarso, 2021Tranquillus
horeKu wajahan gunnada dib loo cusbooneysiiyay ee Macron ee shaqaalaha "khadka labaad"?
socdaMa ku baran kartaa Shiinaha khadka tooska ah?